Vanorarama neHurema Vanoratidzira paMahofisi aVaBiti
HARARE — Vanorarama nehurema varatidzira neChitatu pamahofisi egurukota rezvemari, VaTendai Biti, vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mari yayanga isiri kuvapa kwemakore masere adarika.
Vanorarama nehurema vanga vakatakura mapepa ane zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi “Tionewo seVanhu”.
Mumwe wevaratidziri ava, Va Tendai Dimikira, vanoti hurumende iri kuvabata nekuseri kwemawoko.
Mumwe muratidziri, Amai Sithokozile Mathuthu, vanotiwo havasi kumbopihwa mari yavakavimbiswa nebazi rinowona nezvevanhu vanotambura. Bazi iri rinonzi rakavimbisa kubhadhara vanorarama nehurema mari inoita makumi maviri emadhora pamwedzi wega-wega kuitira kuti vakwanise kubatsirikana.
Asi vanorarama nehurema ava vanoti havana kana zukwa zvaro ravati vapihwa mumakore masere adarika.
VaDimikira vanoti kunyange hazvo bumbiro idzva remitemo yenyika,iro risati rave mutemo wenyika richicherechedza kodzero dzevanorarama nehurema, hurumende inofanirwa kusungirwa kuona kuti ikodzero dzevanorarama nehurema dzachengetedzwa.
Vamiriri vevanorama nehurema ava havana kukwanisa kusangana naVaBiti, asi vasangana nana muzvinahofisi mubazi rezvemari avo vanonzi vavavimbisa kuti vachanyatsozeya nyaya iyi naVaBiti.
Hatina kukwanisa kutaura VaBiti pamwe negurukota rinowona nezvevashandi pamwe nevanoshupika, Amai Paurina Gwanyanya Mpariwa, sezvo vanga vari muparamende manga muchizeyewa bhiri rebumbiro remitemo yenyika kunyange hazvo Va Biti vachigarotaura kuti homwe yehurumende yakabooka.
Zvichakadai, dare repamusoro ratura mutongo wekuti mutungamiri wevechidiki muMDC-T, Va Solomon Madzore, vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutuka mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
VaMadzore vanonzi vakafananidza VaMugabe nedhongi rinogamhina pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo ku Mushumbi Pools kuMbire mudunhu reMashonaland Central muna Kubvumbi.
VaMadzore vakanga vapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso namejasitiriti wemuBindura akanzwa nyaya iyi svondo rapera, asi muchuchisi wehurumende, VaMunyaradzi Mataranyika, vakashandisa chikamu 121 chemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act chinoita kuti musungwa arambe ari mujere kwemazuva manomwe hurumende ichipikisa mutongo wedare wekupa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kudare repamusoro.